မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: လီမင်ဟိုနဲ့ ခဏတာ
Posted by mabaydar at 2:02 AM
အကိုဆိုရင် ဒီထက် ရှက်နေမလားပဲ..ဟိဟိ။
ကိုရီးယားကားတွေကို တစ်ကားမှကို မကြည့်ဖူးတာ..
interesting & funny!
ဒါပေမဲ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။ အဲလိုလေး ဆွဲပေးဖို့ စိတ်ကူးရတာကလည်း ချစ်စရာပဲ။
လီမင်ဟိုဆိုတာ အခုမှသိရပေမဲ့ မဗေဒါရဲ့ အရေးကြောင့် ဖတ်တဲ့ကျတော်မှာပါ စိတ်လှုပ်ရှားနေသဗျ။
Thanksalot, I like Lee Min Hoalot.
သွားကြိုရတာထက် လိုက်ပို့ရတာ ပိုခက်တယ်နော်...
မဗေဒါ အမေကလည်း သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ :D
8/04/2010 11:53 AM
သြော်.. လူတစ်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ ကြောက်ခမန်းလိလိပါလားနော်.... အားကျလိုက်တာ.. အဟိ... ဟိဟိ... ဒါနဲ့ ဆက်တွေးမိတယ်.. အဲဒီကနေ ၀ုန်းကနဲ ကျသွားရင်လည်း နေတတ်မှနော့... မဗေဒါတို့ကတော့ လန်းတယ်ဗျာ... ဘာပဲပြောပြော ပျော်ရှာကြီး..ဖတ်ရတာ..း)))
သြော် ဗေဒါရယ်.....သနားစရာကလေးလေးလိုပါဘဲလားကွယ်။ညီမမှာ အစ်ကိုတွေမောင်တွေရှိလားဟင်?????
ဒီpost ကိုဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာအရမ်းရီချင်တယ်ကွာ တကယ်ဘဲ။ ဘာကိုရယ်ချင်မှန်းတော့မသိဘူး။ပြောမထွက်ဘူးဖြစ်နေတာ။
အိမ်ရှင်ကိုဧည့်သည်ကစော်ကားသလိုဖြစ်ရင်တော့ခွင့်လွှတ်ကွာ။မဗေဒါရဲ့အဲဒီ post တွေထက်ကောင်းတဲ့post တွေဖတ်ရအောင် မြန်မြန်ယောက်ျားရပြီးရင့်ကျက်တဲ့သူဖြစ်သွားအောင် ရှာပေးဦးမှဘဲ။
ခုလို လာရောက်ဖတ်ရှု ကွန်မန့် ကြတဲ့အတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် :)
လီမင်ဟိုရဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားတော့ကြည့်ဖူးတယ်။ တော်တော်အရပ်ရှည်မယ်ထင်တာပဲ။ အပြင်မှာတော့ မသိဘူးလေ။ မဗေဒါတို့ကတော့လုပ်ချလိုက်ပီ။ အင်း..ခုလို မဗေဒါလုပ်လို့လည်း လီမင်ဟိုရဲ့ဓါတ်ပုံတွေ မြင်ခွင့်ရတာတော့ ကျေးဇူးပါ။
စာဖတ်ပြီး ပြုံးနေမိတယ်။ အန်တီက သိပ်ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်။ :D
To: Anonymous 8/04/2010 3:20 PM
ဧကနတော့ ပြောတဲ့သူကြည့်ရတာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ယောင်္ကျား(သို့) မိန်းမရလို့ ဒုခတွေ့ပြီး သူများတွေကိုပါ အချွန်နဲ့မချင်နေပုံပဲ။ ဒါမှမဟုတ် အမျိုးတွေအားလုံးက ရင့်ကျက်ချင်တာကို ယူမယ့်လူမရှိလို့ စောင့်နေရပုံပဲ။ ကျိတ်မနိုင်ခဲမရနဲ့ မဗေဒါပျော်ပျော်နေတာ မကြည့်နိုင်ပဲ အပူရှာနေလိုက်တာ သနားစရာပဲ။
ဗေဒါရေ.... ကျေးဇူးတင်တယ်ကွယ်.။ ကိုးရီးယားမင်းသားတွေ အားလုံးထဲမှာ ဒို့ကတော့ လီမင်ဟိုကို အကြိုက်ဆုံးပဲ..။